Shina Crawler Shot Blasting Machine mpanamboatra & mpamatsy - Puhua
an-trano > Products > Milina fanapoahana tifitra > Crawler Voatifitra Blasting Machine
Crawler Shot Blasting Machine Ny fehikibo vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fehikibo dia mitifitra milina fanapoahana idealina mihintsana amin'ny ampahany betsaka amin'ny habe kely sy salantsalany.
1.Fampidirana ny Crawler Shot Blasting Machine
Crawler Shot Blasting Machine Ny fehikibo vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fehikibo dia mitifitra milina fanapoahana izay mety hianjera amin'ny ampahany betsaka amin'ny ampahany kely sy salantsalany.
Ity milina fipoahana fipoahana kely ity dia mampiasa fehikibo vita amin'ny kofehin-kibo hitafy entana.
Ireo milina famafazana famaohana miaraka amin'ny conveyor fehikibo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ambony ny andiany amin'ny ampahany, entina amin'ny tanana na mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny loader skip hidrol.
Ny mpampita fehikibo dia vita amin'ny fingotra vita amin'ny akanjo. Ny fihodinany dia mahatonga ny faritra hianjera, ary amin'ity fihetsika ity dia miharihary amin'ireo tifitra natsipin'ny turbines ny velaran'ny faritra sasany.
Ny famoahana ireo ampahany dia azo avy amin'ny fihodinan'ny mpampita fehikibo amin'ny lafiny mifanohitra amin'izany. Ny ampahany dia mety hianjera mivantana ao anaty kaontenera poakaty na amin'ny fehikibo famonoana na mpampita mampihorohoro.
Ny fahaizan'ny max loading dia mety miovaova amin'ny 200 ka hatramin'ny 600 Kilos amin'ny lanjany.
2.Famaritana ny Crawler Shot Blasting Machine:
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra karazana Crawler Shot Blasting Machine izay tsy manara-penitra arakaraka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa amin'ny antsipirian'ny workpiece, ny lanjany ary ny famokarany.
3.Details an'ny Crawler Shot Blasting Machine:
4. Fanamarinana ny Crawler Shot Blasting Machine:
Ny orinasanay dia nandalo mari-pahaizana CE, ISO. Vokatry ny milina Crawler Shot Blasting Blaogera manara-penitra :, serivisy ho an'ny mpanjifa sy vidiny mifaninana, nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra firenena 90 mahery izahay tany amin'ny kaontinanta dimy.
2. Ahoana ny fametrahana Crawler Shot Blasting Machine :?
4. Ahoana ny fifehezana ny kalitaon'ny Crawler Shot Blasting Machine :?
5. Inona ny ampahany amin'ny asa azo diovin'ny Crawler Shot Blasting Machine :?
Raha liana amin'ny Crawler Shot Blasting Machine ianao :, azonao atao ny mifandray aminay.
Hot Tags: Crawler Shot Blasting Machine, Buy, Customized, Bulk, China, Cheap, Discount, Low Price, Buy Discount, Fashion, Newest, Quality, Advanced, Durable, Easy-Maintainable, Latest Selling, Manufacturer, Suppliers, Factory, in Stock, Free Santionany, marika, vitaina any Chine, vidiny, lisitry ny vidiny, teny nalaina, CE, Warranty herintaona